Kachasị emeputa Robot na -emepụta ikuku nke FAUCI na ụlọ nrụpụta | FAUCI
Mwepụ ikuku, ịgba ọgwụ mgbochi
na igwe nhicha ụlọ
Ụlọ ọrụ, ụlọ oriri na ọ hotelsụ hotelsụ, nnukwu ụlọ ahịa, ogige azụmahịa, ụlọ ngosi, ụlọ ọgbakọ, wdg.
IHE NDỊ A GA -EME
n'ala dị nro ma sie ike:
Ojiji nke mwepụta klorine dioxide dị ọcha na -ewepụta nwayọ na teknụzụ oxygen na -arụ ọrụ ROS iji gbuo ngwa ngwa nje na nje na ikuku gbara ya gburugburu, mebie ma wepu gas na -emerụ ahụ dị ka formaldehyde;
Kwado modul mgbanye uzuzu uzuzu, ọ dịghị mkpa ịgbanwe akwa nhicha uzuzu ugboro ugboro, ọrụ enweghị nchekasị;
Na-adabara ala siri ike na kapeeti nke ihe dị iche iche, nhicha na-enweghị mgbochi;
Ntughari njigharị azụgharị, ịgbanwere mgbanwe n'etiti akwụkwọ ntuziaka na ọnọdụ smart;
Nchacha/ihe nhicha/uzuzu uzuzu na ihe ndị ọzọ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ site na akwa oyi akwa, ahịhịa mpịakọta + ahịhịa n'akụkụ + uzuzu na-akwagharị uzuzu, ọ dịghị akụkụ nwụrụ anwụ ka a na-asachaghị nke ọma;
Nhazi oge ọrụ mmalite oge. Jiri udo nke uche karịa mee ihe;
Obere ọrụ mode, nnweta;
Breakpoint maliteghachiri ọrụ nyocha, hụ na ọrụ zuru ezu;
Ejikọtara ọtụtụ ihe mmetụta na ọnọdụ ziri ezi, na-eduga ụlọ ọrụ teknụzụ mkpanaka zuru oke;
Maapụ dabere na ya, ịtụgharị onwe ya, nhazi ụzọ akpaka, mkpuchi oge, nzaghachi na-agbanwe agbanwe na ọnọdụ ndapụta na mgbanwe.
Akụkụ ngwaahịa 700 (L) *570 (W) *850 (H) mm
Obosara nchacha (ahịhịa bi-mpụta) Ogologo ya bụ 740 mm
Ọgwụ kachasị elu 1200㎡/h
Votage gosiri 24V
Caoacity batrị Li-lon 40Ah
Ndụ batrị 2h
Ike kacha Ike nke 1100W
Gosiri ike moto ike 300W
Gosiri ike moto moto 200W
Gosiri ike moto moto 25W
Ike moto ikike ịmịkọrọ 560W
Mpịakọta mkpofu ahịhịa 2.5 l
Oke agụụ 181Pa
Oke mmụpụta kacha 2.0m³/nkeji
Nhazi ihe mmetụta Lidar, igwefoto omimi *3, igwefoto nlele dị elu (nhọrọ), ihe mmetụta ultrasonic, eriri mgbochi mgbochi eletrọnịkị, usoro mgbochi dobe
akuku ịrị 8 Celsius
Ọsọ njem 0-3.6km/h
mkpọtụ na -agba ọsọ <70dB (A)
Ịchọta ikpo ahụ na akpaghị aka
Ịkwụ batrị n'onwe ya
Emebere FAUCI Robot Charging Pile ka ọ gbatịkwuo ndụ batrị nke robot ahụ.
Ọ dabara na ụdị ugbu a: FAUCIMAPR O1
Igwe nchaji gbatịpụrụ ndụ batrị nke ọma maka robot ahụ. Mgbe batrị dị ala, robot nwere ike ịlaghachi na -akpaghị aka ka ọ jikọọ ikpo ọkụ maka imeju. Mgbe emezigharịchara, ọ nwere ike laghachi ọrụ ozugbo.
Akụkụ ngwaahịa 450 (L)*420 (W)*615 (H) mm
Ike kacha 900W
Gosiri voltaji 110V
Iru mmiri na -arụ ọrụ - 10 ℃ ~+45 ℃
Okpomọkụ na -arụ ọrụ 20%~ 75%RH
Okpomọkụ nchekwa - 40 ℃ ~+45 ℃
Iru mmiri Nchekwa 20%~ 93%RH
Ihe nrụnye chọrọ Voltaji: 110V current Ọkụ eletrik: 10A ， Ọdụ nkwụnye Triplex
Osote: Igwe nchacha ikuku nke FAUCI
Robot nhicha ikuku
Robot nke na -ehicha ikuku
Robot Air Sterilizer
Agụụ Robot kacha mma 2021
Ihe nhicha ikuku Robot
Robot Disinfection nke UV
Robot nhicha ihe nhicha